Etu esi eweputa aha gi maka SEO (na ihe nlere)
You maara na ibe gị nwere ike inwe ọtụtụ aha dabere na ebe ịchọrọ ka egosipụta ha? Ọ bụ eziokwu… ebe a bụ aha anọ dị iche iche ị nwere ike ịnwe maka otu ibe na sistemụ njikwa ọdịnaya gị.
Kpido aha - HTML nke egosiri na ihe nchọgharị gị ma depụta ma gosipụta na nsonaazụ ọchụchọ.
Peeji Mbụ - aha ị nyere peeji gị na sistemụ njikwa ọdịnaya gị ka ịchọta ya dị mfe.
Ihuakwụkwọ peeji - nke bụ mkpado H1 ma ọ bụ H2 na elu peeji gị nke na-eme ka ndị ọbịa gị mara ihu akwụkwọ ha nọ.
Rich Snippet Mbụ - aha ịchọrọ iji gosipụta mgbe ndị mmadụ kesara ibe gị na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta na nke egosiri na nhụchalụ. Ọ bụrụ na ọnweghị ego bara ọgaranya, nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-abụkarị nke ndabara na mkpado aha.
M na-ebuli nke ọ bụla n’ime ha mma mgbe m na-ebipụta peeji. Na ndi mmadu, enwere m ike ikwenye. Na ọchụchọ, Achọrọ m ijide n'aka na m na-eji isiokwu. Na isiokwu, Achọrọ m ịkọwapụta maka ọdịnaya ndị na-eso. Na n'ime, Achọrọ m ịchọta peeji m dị mfe mgbe m na-achọ sistemụ njikwa ọdịnaya m. N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na ịmepụta nke gị aha mkpado maka engines ọchụchọ.
Ntọala mkpado, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, bụ ihe kachasị mkpa na ibe ahụ mgbe a bịara n'ịkọwapụta ọdịnaya gị nke ọma maka usoro ọchụchọ ị na-achọ ka achọta. Na maka ịhụnanya nke ihe niile bụ SEO… Biko melite aha obibi ulo gi site na Mbido. M na-atụ ụjọ oge ọ bụla m hụrụ saịtị ebe ha anaghị ebuli aha peeji nke! Na-asọ mpi na nde ibe ndị ọzọ a na-akpọ Home!
Ego ole ka Google gosipụtara na Aha Aha?
Know ma na ọ bụrụ na mkpado aha gị karịrị mkpụrụ edemede 70 nke Google nwere ike iji ọdịnaya dị iche na ibe gị kama? Ma ọ bụrụ na ị gafere mkpụrụedemede 75, Google na-aga eleghara ọdịnaya ahụ anya mgbe mkpụrụ edemede 75 gachara? Aha njirimara ahaziri nke ọma kwesịrị ịbụ n'etiti mkpụrụedemede 50 na 70. O yikarịrị ka m ga-ebuli n'etiti mkpụrụ okwu 50 na 60 ebe ọ bụ na ọchụchọ mkpanaka nwere ike belata mkpụrụedemede ole na ole.
N'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ, ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anwa ịkwakọ na ịju ọtụtụ ozi na-enweghị isi ma ọ bụ sara mbara na ha aha mkpado. Ọtụtụ na-etinye aha ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ yana aha peeji. Ọ bụrụ na ị na-ranking ọma gị ika Keywords, utu aha ekwesighi itinye aha ụlọ ọrụ gị.
O nwere ihe ole na ole, n'ezie:
Ị nwere oke ika. Ọ bụrụ na m New York Times, dịka ọmụmaatụ, enwere m ike itinye ya.
ị mkpa ika mmata ma nwee afọ ojuju dị ukwuu. M na-eme nke a mgbe mgbe site na ndị ahịa na-eto eto na-ewulite aha ha ma ha etinyewo nnukwu ego n'ime nnukwu ọdịnaya.
Have nwere aha ụlọ ọrụ n'eziokwu gụnyere isiokwu dị mkpa. Martech Zone, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịba uru kemgbe Nwachukwu bụ okwu a na-achọkarị.
Ulo akwukwo aha ulo
Mgbe imchọta ebe obibi, m na-ejikarị usoro ndị a
Keywords na-akọwa ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ | Aha Ụlọ Ọrụ
Fractional CMO, Ọkachamara, Ọkà Okwu, Onye Ọdee akwụkwọ, Podcaster | Douglas Karr
ma ọ bụ:
Mee ka ahịa gị na ahịa ahịa gị bulie oke | Highbridge
Geographic Peeji nke Aha Tag Ihe Nlereanya
Olee ihe enyemaka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke niile mobile Google ọchụchọ na-metụtara ọnọdụ dị ka Blue Corona. Mgbe m na-optimizing Mbụ Tags maka ala peeji, M na-eji usoro ndị a:
isi okwu na-akọwa peeji | ọnọdụ ala
Ọrụ Infographic Design | Indianapolis, Indiana
Isiokwu Ndepụta Nkeji Akwụkwọ
Mgbe m na-optimizing Mbụ Tags maka Nde peeji, M na-eji na-eso usoro:
isi okwu na-akọwa peeji | udi ma obu ulo oru
Mgbanwe ihu igwe ọdịda | Lezienụ Ọrụ Pịa Pịa
Ajụjụ na-arụ ọrụ dị ukwuu na aha Tags
Echefula na ndị ọrụ njin ọchụchọ na-achọkarị ịjụ ajụjụ zuru ezu ugbu a na injin ọchụchọ.
Ihe dị ka 40% nke ajụjụ ọchụchọ niile dị na United States nwere isiokwu abụọ.
Ihe karịrị 80% nke ọchụchọ ịntanetị na United States bụ okwu atọ ma ọ bụ karịa.
Ihe karịrị 33% nke ajụjụ ọchụchọ Google bụ okwu 4 + ogologo
Na post a, ị ga - ahụ aha ya bụ:
Etu esi achota nkpado aha gi maka SEO (na ihe omuma)
Ndị ọrụ na-eji Onye, Kedu, Ihe, Mgbe, na Otu na nyocha ha choro karie ka ha mere n'oge gara aga. Inwe aha ajuju dakọtara na njụ-ajụjụ ọchụchọ bụ ụzọ dị mma iji wepụta ederede zuru oke ma chụpụ okporo ụzọ ọchụchọ na saịtị gị.
Ọtụtụ saịtị ndị ọzọ edeela banyere aha aha na aha SEO ejighi m n'aka na m ga-asọ mpi na ha ebe ọ bụ na saịtị ha na-achịkwa usoro metụtara SEO. Yabụ, agbakwunyere m na Ihe Nlereanya iji gbalịa ịkọwa ọdịiche nke post m na ịpịkwu clicks!
Ikwesighi ime ihere banyere iji otutu okike dika o kwere mee. N'iji mkpirisi okwu elebara anya nke mbu, nke ozo na-esote ya bu usoro kachasi nma.
Aha Tag Tag njikarịcha na WordPress
Ọ bụrụ na ị nọ na WordPress, ngwaọrụ dị ka Ọkwa Math SEO ngwa mgbakwunye -ekwe ka ị hazie ma gị post aha na gị na peeji nke aha. Ha abụọ dị iche. Site na saịtị WordPress, aha ntinye aha bu ihe di n'ime ederede ederede, ebe aha akwukwo gi bu aha mkpado nke a na-ejide n'aka engines ọchụchọ. Enweghị WordPress SEO ngwa mgbakwunye, ha abụọ nwere ike ịbụ otu. Ọkwa Math na -enye gị ohere ịkọwa ha abụọ… Ma ị nwere ike ịhụ nhụchalụ ya na njiri mara agwa:
60% nke ọchụchọ Google na -eme ugbu a site na mkpanaka Ọkwa Math na -enyekwa nlele mkpanaka (bọtịnụ mkpanaka aka nri elu):
Ọ bụrụ na ịnweghị ngwa mgbakwunye ebe ị nwere ike ịkwalite snippets gị bara ụba maka mgbasa ozi mmekọrịta, aha mkpado a na-egosiputa site na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta mgbe ịkekọrịta njikọ.
Zụlite nkenke, okwu na-akpali akpali nke na-eme ka ịpị aka! Lekwasị anya na isiokwu ahụ n'ihe ị kwenyere na onye ọbịa ga-elekwasị anya na ọ nweghị ihe ọzọ. Echefukwala ebuli gị meta nkọwa iji mee ka onye ọrụ ọchụchọ gị pịa pịa.
Pro NDỤMỌDỤ: Mgbe ị bipụtara peeji gị, lelee ịhụ ka ị si nọrọ n'izu ole na ole jiri ngwa ọrụ dịka Semrush. Ọ bụrụ na ị hụ na ibe gị na-ahazi nke ọma maka nchikota dị iche iche nke isiokwu… rewrite aha gị iji mee ka ọ dị nso (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, n'ezie). M na-eme nke a oge niile na isiokwu m ma m na-elele ọnụọgụ pịa site na Search Console abawanye karịa!
Ngọnarị: Ana m eji njikọ njikọ m maka Semrush na Ọkwa Math n'elu.
Tags: HTMLnjikarịchaaha peejiokwa ná mgbakọ na mwepu seosearch engine njikarịchaAahaodide aha njirimaraisiokwu mkpado ahaaha mkpado ahanjikarịcha aha njirimaraaha njiri mara ọgaranyaaha mkpado seoaha mkpadookwu na njụ-ajụjụ ọchụchọ
Ọkt 16, 2012 na 9:34 AM
Mkpado aha bụ ihe meta kacha mkpa ma bụrụ ọkwa ọkwa. Ọtụtụ weebụsaịtị na-emehie nke imefusị oghere a site na iji naanị aha ụlọ ọrụ. O kwesịrị iji mkpụrụokwu kọwaa ihe dị na ibe.
Nọvemba 1, 2012 na 1:21 nke ụtụtụ
dị egwu post na nkọwa… N'ọdịnihu, nke a nwere ike na-ezo aka dị ka Akwụkwọ Nsọ nke Title Optimization! ịkụ aka..
Nọvemba 1, 2012 na 1:38 nke ụtụtụ
Enwere ekele dị ukwuu @wiseStep!
Onye edemede VoIP
Mee 14, 2013 na 3: 36 PM
Achọghị m ịga n'ihu na aha blọgụ m mgbe aha ibe m gachara mana amaghị m otu esi eme ya. Ana m eji ngwa mgbakwunye All In One Seo Pack, ewepụrụ m %blog_title% nke na-eso %page_title%, ugbu a ọ bụ %page_title%. Mana ọ ka na-aga n'ihu. Na header.php aha koodu bụ, na na page.php aha bụ . Kedu ihe m ga-eme, yabụ aha blọgụ agaghị aga n'ihu mgbe aha ibe gachara.
Mee 14, 2013 na 4: 00 PM
M ga-eme ihe n'eziokwu na-ebupụ ntọala gị site na Niile In One SEO Pack Plugin wee wụnye Yoast SEO Plugin maka WordPress. Ị nwere ike ibubata ntọala ebe ahụ na ihe ị nwere n'elu kwesịrị ịrụ ọrụ.